OTU ESI ARỤZI WINDOWS INSTALLER NA WINDOWS XP - WINDOWS - 2019
Dezie ọrụ Windows Installer na Windows XP
Ịwụnye ngwa ọhụrụ ma wepụ ihe ochie na Windows XP arụ ọrụ arụ ọrụ site na Windows Installer ọrụ. Na n'ọnọdụ ebe ọrụ a kwụsịrị ịrụ ọrụ, ndị ọrụ na-eche eziokwu ahụ bụ na ha enweghị ike ịwụnye na iwepu ọtụtụ ngwa. Ọnọdụ a na-akpata ọtụtụ nsogbu, ma e nwere ọtụtụ ụzọ isi weghachite ọrụ ahụ.
Idozi Windows Installer Service
Ihe kpatara ịkwụsị Windows Installer nwere ike ịbụ mgbanwe na alaka ụfọdụ nke ndekọ ma ọ bụ nanị enweghị faịlụ dị mkpa nke ọrụ ahụ n'onwe ya. N'ihi nke a, enwere ike idozi nsogbu ahụ ma ọ bụ site na itinye ndenye na ndekọ, ma ọ bụ site na ịtinye ọrụ ahụ.
Usoro 1: Debanye aha ụlọ akwụkwọ dị iche iche
Iji malite, ka anyị gbalịa ịdebanye aha ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị Windows Installer jiri. Na nke a, a ga-agbakwunye ntinye dị mkpa na ndekọ ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a ezuola.
Nke mbụ, mepụta faịlụ na iwu ndị dị mkpa. Iji mee nke a, meghee ihe ndekọ ahụ. Na menu "Malite" gaa ndepụta "Mmemme niile", wee họrọ otu "Ụdị" wee pịa ụzọ mkpirisi Notepad.
Tinye ederede na-esonụ:
regsvr32 / u / s% windir% System32 msi.dll
regsvr32 / u / s% windir% System32 msihnd.dll
regsvr32 / u / s% windir% System32 msisip.dll
regsvr32 / s% windir% System32 msi.dll
regsvr32 / s% windir% System32 msihnd.dll
regsvr32 / s% windir% System32 msisip.dll
Na menu "Njikwa" anyị pịa na otu Zọpụta Dị ka.
Na ndepụta "Ụdị Njikwa" họrọ "Faịlụ niile", na dị ka aha anyị na-abanye "Regdll.bat".
Gbaa faịlụ ahụ e kere eke site na ịpị na ntinye na ichere maka njedebe nke ndebanye aha ụlọ akwụkwọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịnwere ike ịnwale itinye ma ọ bụ hichapụ ngwa.
Usoro 2: Wụnye ọrụ ahụ
Iji mee nke a, site na ọrụ gọọmenti ọrụ melite KB942288.
Gbaa faịlụ ahụ iji gbuo ya site na ịpị bọtịnụ aka ekpe na ya, pịa bọtịnụ "Na-esote".
Nabata nkwekọrịta ahụ, pịa ọzọ "Na-esote" ma chere maka ntinye na ndebanye aha faịlụ.
Push bọtịnụ "OK" ma chere ka kọmputa malitegharịa.
Ya mere, ugbu a, ị maara ụzọ abụọ esi edozi enweghị ike ịbanye na ọrụ Windows XP. Na n'ọnọdụ ebe otu usoro anaghị enyere aka, ị nwere ike iji ọzọ.